Kedu usoro dị irè iji chekwaa saịtị?
Ozugbo ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ ghọtara ezigbo ụlọ njikọ, ha na-amalite na-achọ ụzọ iji nweta backlinks na saịtị ha. E nwere ọtụtụ njikọ njikọ usoro na ụzọ ndị nwere ike iduhie onye ahịa na-ere ahịa ma na-ebute nsonaazụ ọma. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jiri nlezianya họrọ nke kwesịrị ekwesị na azụmahịa njikọ ụlọ ọrụ gị ma jiri nlezianya tinye ha na saịtị gị.
Ejiri isiokwu a iji gosi gị nzaghachi bara uru na saịtị gị SEO na olee ụzọ kachasị mma isi wuo ha.
Ụzọ iji backlink a saịtị
Usoro usoro ụlọ njikọ ga-amalite na nyocha zuru ezu. Ntụle a kwesịrị igosi gị saịtị ndị kwesịrị ekwesị maka ịbịara gị ma gosi na ị bara uru maka azụmahịa gị.
Nyochaa niche ahịa gị iji chọta ndị nkwusa nwere ike ịchọta
Ọ bụrụ na backlinks nke na-ezo aka na saịtị gị na-egosi na ibe weebụ ibe weebụ, mgbe ahụ ọtụtụ o yikarịrị ka njikọ dị otú ahụ ga-emerụ mgbalị gị na saịtị ma nye ihe mgbaàmà maka engines ịchọpụta na ị na-eme ihe omume aghụghọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji buru ụzọ chọpụta ma ị ga-etinye njikọ gị n'otu ngalaba ma ọ bụ na ọ bụghị. Iji nyochaa njirimara nke ebe nrụọrụ weebụ, ị nwere ike iji Sistem Analyzer. O nwere ike inye gị usoro niile dị mkpa ga-enyere gị aka ịmepụta mkpokọta foto gbasara ebe nrụọrụ weebụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele saịtị maka tagollow mkpado na backlinks. Nkịtị na-eso njikọ iziga njikọ ihe ọṅụṅụ na ebe nrụọrụ weebụ na-ezo aka ma nye amaokwu maka engines ọchụchọ banyere ikike na weebụsaịtị. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị nkwusa mejupụtara akara "ala" maka backlinks ha tinye na ibe ha. Ọ bụghị ihe ị na-achọ. Ụdị backlinks ndị ahụ agaghị eme ka ị baa uru ọ bụla, ma kpochapụ oge na ego gị. Ị nwere ike ịlele ma njikọ ọ na-eme dofollow ma ọ bụ na-ebugharị site na ndị nyocha nke enwuru na ihe nchọgharị nke oge a.
Nyochaa saịtị nwere ikikere
Iji lelee ikike ngalaba ebe nrụọrụ weebụ, ịnwekwara ike imepụta nchịkọta nchịkọta Semalt.Njikwa ngalaba bụ echiche dị mgbagwoju anya nke na-agụnye metrics dị iche iche dịka PageRank, ọnụ ọgụgụ nke ndị nleta na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ, mkpokọta ntọghata weebụ na àgwà nke backlinks nke na-ezo aka na ya.
Tụlee ugboro ugboro edepụta
A pụrụ iwere akwụkwọ weebụ dịka ndụ ma ọ bụrụ na ọ na-ebipụta ogo na mgbe niile. ozi dị mkpa nke nwere ike inye aka maka ndị ọrụ. Ebe nrụọrụ weebụ na-aga nke ọma na-edebe ọdịnaya ha ruo ụbọchị ma bipụta ya otu ugboro n'izu. Ya mere, ị ga-achọ maka onye mbụ ma zere nke ikpeazụ dịka ọrịa ahụ.
Tulee okirikiri okporo ụzọ weebụ
O doro anya na ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ọtụtụ okporo ụzọ ga - eme ka i nwekwuo uru ihe ndị ahụ nwere nanị ndị nleta ole na ole kwa ụbọchị. Iji lelee uru okporo ụzọ, ị nwekwara ike na-ezo aka na ngwá ọrụ nchịkọta Analytics Semalt. Jide n'aka na ị na-eme ya tupu ị rute onye nwe ụlọ Source .